Ihowuliseyili Pizza Couple Sweatshirt yoMvelisi kunye noMthengisi | Into
Ukunxiba iimpahla zihlala zingoyena mthombo wolonwabo, ngakumbi kwizibini ezitshatileyo. Abantu bathanda ukunxiba iimpahla ezifanayo ezinjengee-T-shirts, ii-Sweatshirts, ii-Hoodies, kunye nee-sweaters kwizihlandlo ezahlukeneyo. Ngokusebenzisa ezi zinxibo, awungekhe udlulise kuphela imiyalezo emininzi kunye nothando kwisibini sakho, kodwa unokuxelela abanye ngothando lwakho.
USD $69.00 USD $59.00 (% icimile)
I-Pizza Matching Sweatshirts enemizobo eyahlukeneyo enje ngeLuthando, Mnu, noNksk.
Imizobo eprintwe kwiiSweatshirts ezifanayo zithetha ngothando lweemvakalelo zeqabane lakho kunye nokwenza imemori engunaphakade. Njengoko ii-Sweatshirts zethu zenziwe ngomgangatho ophezulu womqhaphu onemibala ebonakalayo ebonakalayo, ziya kuhlala zikwimeko entle yokugcina imemori yakho.
I-Pizza Sweatshirts zethu zenziwe nge-100% ekumgangatho ophezulu womqhaphu kwaye unokuxhathisa nakuphi na ukungcola kokutya. Nditsho nasemva kokuhlanjwa okuninzi, uyakuziva ithamba kwaye ithamba. Umbala kunye nemizobo kwiiSweatshirts ziya kufana nokuba zintsha.
* Isishwankathelo seMveliso.
Ipakethi yeeSweatshirt ezimbini ezihambelana nePizza.
Ezihempe zenziwe nge-100% ekumgangatho ophakamileyo womqhaphu.
Amancinci, aphakathi, makhulu, makhulu, kunye no-2,3 ubukhulu obukhulu ziyafumaneka.
I-Sweatshirt yethu iyafumaneka ngemibala emihlanu eyahlukeneyo ebonakalayo, okt, Mhlophe, Mnyama, Ngwevu, nguMkhosi wamanzi, Bomvu.
Okwangoku kukho isaphulelo se-14% kuso sonke isitokhwe sePizza Sweatshirts.
Umzantsi owomileyo kunye nomqukumbelo ukuze uzive ukhululekile.
Unokwenza imifanekiso eqingqiweyo kwezi Sweatshirts ngokomsitho wakho.
Umgangatho wombala kunye nemizobo iqinisekisiwe.
* Ukuhlamba kunye nokuyalela Imiyalelo.
Hlamba iiSweatshirts ngaphakathi ngaphandle.
Ukuhlamba izandla kuyacetyiswa.
Ukuhlamba ngamanzi abandayo akuyi kuwonakalisa umbala.
Umoya owomileyo wendalo uya kunyusa ixesha lokuphila kweeSweatshirts.
* Indawo ebalulekileyo.
Umbala weSweatshirts yePizza unokwahluka kumfanekiso ngenxa yeemonitha zekhompyuter.
Egqithileyo Isikipa sePizza
Okulandelayo: Iipizza zeHoodies zePizza
I-Sweatshirt yesiqhelo yePizza
I-Sweatshirt ehlekisayo yePizza
Isikhumbuzo sePizza Sweatshirt
I-Pizza Couple Sweatshirt Unisex
I-Sweatshirt yeholide yePizza
I-Pizza Honeymoon Sweatshirt
I-Pizza nje i-Sweatshirt etshatileyo
I-Pizza Ukutshatisa amaSweatshirt
I-Pizza Valentines Day Sweatshirt